Iindaba - 2020, amaxabiso entengiso yentsimbi eTshayina aya kuwa kuqala kwaye emva koko anyuke, ngokuhla okukhulu kunye nokunyuka
I-2020, amaxabiso entengiso yentsimbi e-China aya kuwa kuqala kwaye emva koko anyuke, ngokuhla okukhulu kunye nokunyuka
Ngo-2020, amaxabiso entengiso yentsimbi e-China aya kuwa kuqala kwaye emva koko anyuke, ngokuhla okukhulu kunye nokunyuka. Nge-10 kaNovemba ka-2020, isalathiso samaxabiso esinyithi esizwe siya kuba ngamanqaku ayi-155.5, ukonyuka nge-7.08% kwangelo xesha linye kunyaka ophelileyo. Iziko lomxhuzulane liye lenyuka.
Imfuno yabathengi iya kuba namandla ngakumbi. Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, uqoqosho olukhulu lwesizwe luye lwachacha ngokuthe chu, izinga lokukhula kwezoqoqosho libonakalise ukubuyela umva okumise okwe-V, kwaye utyalo-mali oluzinzileyo lube yinto ekujoliswe kuyo kulungelelwaniso lokujikeleza. Kuqikelelwa ukuba imfuno yentsimbi ekrwada (kubandakanywa ukuthunyelwa ngaphandle kwentsimbi ngokuthe ngqo) iyakutsibela kwinqanaba le-1 lezigidi zeetoni, kuqatshelwe umtsi omtsha kwimbali.
Amaxabiso ezinto zokunyibilikisa izinto anyuke kakhulu. Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, ngenxa yezinto ezahlukeneyo, amaxabiso ezinto ezenziwe ngentsimbi ekrwada afana ne-iron ore kunye necoke anyuke kakhulu kwilizwe liphela, anyusa iindleko zokuveliswa kwentsimbi kunye nokwenza inkxaso eyomeleleyo yamaxabiso.
Ukuhla kwexabiso lotshintshiselwano ngedola yaseMelika. Kwi-2020, ixabiso lesinyithi lesizwe liyatshintsha, kunye nokuhla kwedola yaseMelika nayo yinto ebalulekileyo. Ukudodobala kwedola yaseMelika kuyonyusa indleko zokungenisa kwempahla yokunyibilikisa engenisiweyo kunye neemveliso zentsimbi, kwaye kunyuse amaxabiso entsimbi asemakhaya ngokufanelekileyo.
Kwi-2020, amaxabiso esinyithi e-China aya kutshintsha kwaye anyuke, okokuqala, iimfuno zabathengi ziya kuba namandla ngakumbi. Ukusukela kulo nyaka, uqoqosho olukhulu lukazwelonke lubuyele kwimeko entle ngokuthe chu, ukukhula koqoqosho kuye kwajika kwaba kukuhlengahlengiswa okumiswe ngu-V, kwaye utyalo-mali oluzinzileyo luyeyona nto kuguqulwa kuyo. Ngenxa yoko, ukusetyenziswa ngamandla kwentsimbi e-China kuyonyuka endaweni yokwehla ngo-2020. Ingakumbi emva kokungena kwisiqingatha sesibini sonyaka, ibango lesinyithi lesizwe liya kuba namandla nangakumbi Ngokwezibalo, ukusukela ngoJanuwari ukuya kuSeptemba kulo nyaka, ukutyiwa okubonakalayo kweTshayina intsimbi yayizi-754.94 yezigidi zeetoni, ukonyuka konyaka-nge-7.2%. Phakathi kwabo, izinga lokukhula ngoJulayi laliyi-16.8%, ukuba ngo-Agasti yayiyi-13.4%, kwaye ngo-Septemba yayiyi-15.8%, ebonisa ukukhula okukomeleleyo Imfuno yentsimbi (kubandakanya ukuthunyelwa kwentsimbi ngokuthe ngqo) iya kutsibela kwiitoni ezili-1 lezigidi, inyathelo elitsha kwimbali